Pfupiso yebhuku "Guta nembwa" naMario Vargas Llosa | Zvazvino Zvinyorwa
Pfupiso yebhuku iri «Guta nembwa» naMario Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa, munyori wePeruvia uye munhu akakura murondedzero yeSpanish-America yekuongorora kwake kukuru kwehunyanzvi hwekurondedzera uye kuomarara kwavo munhau dzepasirese, akaburitsa basa rake. "Guta rembwa" muna 1962. Iri raive basa rekutanga remunyori uyezve wekutanga kutungamira musangano wakadanwa boom.
En "Guta nembwa", inotaura kuburikidza nekushorwa kwemachismo uye chisimba muchikoro chemauto muLima, kushoropodzwa kwenzanga yePeruvia
Kune avo vasingazive zvinorehwa nekufona tiguu yezvinyorwa, zvinoenderana nekubudirira kukuru kweiyo ChiLatin American novel iyo yakatanga pakutanga Makumi makumi matanhatu anenge. Mune boom iyi, mamwe mabasa akaonekwa aikurudzira kuputsa nemafomu echinyakare enyaya, uye kuti panguva imwechete, akaita kuti mazita evanyori vavo ave nemukurumbira pasi rese. Pakati pavo pane vanyori venhau vechimiro che G. García Márquez, Carlos Fuentes naMario Vargas Llosa pakati pevamwe vazhinji. Ivo vanoshandisa yakafararira uye yakanyanya kuwanda mutauro wepasirese kupfuura zvaivepo kusvika ipapo.
1 "Guta nembwa", zviri nezvei?
1.1 Kubhabhatidzwa kwembwa
1.2 Zviitiko kuchikoro
1.2.1 Kuba kwemakemikari bvunzo uye kufa kwecadet
1.2.2 Uchapupu hwaAlberto uye kubatanidzwa kweJaguar
1.3 Hupenyu mushure mekuchikoro
"Guta nembwa", zviri nezvei?
Guta uye imbwa ...
"Guta nembwa", rakabudiswa mu 1962, inorondedzera utsinye hunotyisa hwakaitwa paboka revadzidzi vadiki kubva pachikoro chemauto muLima. Kubudikidza nezviwanikwa zvakasiyana-siyana zvekurondedzera, zvine hunyanzvi panguva iyoyo, Vargas Llosa anofumura mhedzisiro yedzidzo isina kunzwisiswa yemauto uye anoshora huori hwenyika iyoyo nemhirizhonga yagara iripo.
Tevere, isu tichapfupikisa muchidimbu (kana iwe uchida kuiverenga, zvirinani kuti usiye kuverenga kwechinyorwa ichi pano), zvimwe zvezvikamu zvinoumba.
Iyo koreji yemauto inzvimbo inowanikwa nevakomana vakasiyana siyana kuti vadzidze makore matatu apfuura echikoro chesekondari. Mariri, vadzidzi vanoitirwa mhirizhonga uye yakashata nharaunda. Ivo vana grade vana vanoita hutsinye tsika yekupinda kune vatsva vanopinda gore iro. Mukupindura izvi, vamwe vechidiki vanoumba iyo inonzi "Denderedzwa", iro boka rinofunga kutsiva pavakadzidza vana. Inotungamirwa neJaguar, mukomana ane mhirizhonga anoronga kurwiswa kwakaomarara kune vanopikisana naye uye anove mutungamiri wevamwe vakomana vaanokurudzirawo mhirizhonga. Ricardo Arana, iye ega akamira padivi, anomusundidzira zvachose uye nekuda kweizvi anogamuchira kurohwa zvine hutsinye. Kubva panguva ino anoramba achirwiswa nekutukwa nevamwe vese ma cadet.
Kuba kwemakemikari bvunzo uye kufa kwecadet
Cava, mumwe wevadzidzi vechikoro ichi, anoba bvunzo yemakemikari achiteedzera zvaJaguar. Vakuru vanoziva nezve mhosva iyi kunyangwe ivo vasingakwanise kuziva mutadzi. Ichi ndicho chikonzero ivo vanosarudza kutsiva kune vechidiki vese uye nekuvharira nekuvachengeta muzvikoro zvachose. Mushure memasvondo akati wandei ekusungwa, hunhu hunozivikanwa seMuranda hunoshora Cava pamberi pemachinda uye iye anodzingwa. Nekudaro, panguva yekumwe kufambisa chiitiko chinosuruvarisa chinoitika ... kadheti inogamuchira bara kubva kune imwe nzvimbo isinganzwisisike uye inofa ...
Uchapupu hwaAlberto uye kubatanidzwa kweJaguar
Alberto, akatumidzwa zita rekuti Mudetembi, aive nekutenda kuMuranda (Ricardo Arana). Nechikonzero ichi, anoshora zvisina kufanira zvevaanodzidza navo uye anopomera Jaguar kuna Lieutenant Gamboa. Anofungidzira kuti anga ari mhondi yaArana, asi haana humbowo hwakakwana. Kupindira kwaLieutenant hakuite chero chinhu chakanaka; vakuru vake vanoramba kuferefeta kuti vadzivise zvinonyadzisa zvinokanganisa chimiro chenzvimbo. Ivo vanotyisidzira Alberto kuti vabudirire kunyarara kwake uye varaire kuchinjirwa kwemutungamiriri. MaCadet, avo vanorangwa nekuda kweruzivo rwunopihwa neMudetembi, vanokanganisa vanotenda kuti Jaguar yakavapa munguva yekutsamwa. Iye anobva agamuchira kusekwa nekunyadziswa kwevamwe vake uye anonzwa kusurukirwa kekutanga.
Hupenyu mushure mekuchikoro
Jaguar, akashungurudzika nemafungire evamwe vese ma cadet, anoreurura kuna Gamboa kuti ndiye akaita mhosva iyi. Anotendeuka, anoda kuzvipira, uye akagadzirira kusangana nemhedzisiro yacho. Asi Gamboa anoziva kuti hapana munhu pachikoro anofarira kunzwa kureurura kwake. Iyo inokurudzira iwe kuti udzidze kubva pane chako chikanganiso uye gadzirisa zvehupenyu hwako. Iyo Jaguar inozopedzisira yabatanidzwa munharaunda uye inoroora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Pfupiso yebhuku iri «Guta nembwa» naMario Vargas Llosa
Mary Anne akadaro
Pasina kupokana ibhuku rakanaka. Ini ndinotarisira kutora bhuku racho, nekuti ndakadanana nechinyorwa ichi
Pindura kuna Maria Ana
Ndokumbirawo kuti ndiani akanyora izvi arikushandisa machismo sezwi rinoreva mhirizhonga, kushandisa zvisizvo uye kushungurudzwa kweshoko iri parizvino, chii chisina maturo munguva dzino 2018, unofanirwa kushandisa mhirizhonga, iyo isina murume kana murume uye zvisiri izvo yeese mhirizhonga uye yevakadzi ideological zvisina maturo.
Mhoro shamwari, vashandisi veinternet, kukwazisa uye kutsvoda wapos
Diego anobva kuDora akadaro
ndakaenda kune guzmen y gomez ndikatora matatu emadhora burrito asi mukadzi wacho haana kutaura chirungu saka ndakati pls ndipeiwo taco bitch bitch uye iye anoenderera mberi kuita hure kune mexican pornographic indasitiri. nguva pfupi yapfuura mushure mekunge ndamudaidza uye akandipa suk suk, ine muto wemahara wakasanganisirwa. iye ndokuzoitora mudhongi asati aburitsa ejaculate patortilla. iye akabva adzoserwa kuKenya, ndinoreva venezuela uko ambuya vake vakamumirira ne arepa de crap. iyo arepa yakanga yakazadzwa nemurume spunk uye tsvina yemukadzi, yaive yakanyanyisa uye yakapedzisira iri mubhuku rangu rekubika mari kwainzi mario testino yekubika pa live tv, kwaakadya mubhuku, uye bhuku racho harisisina yakavhurwa nekuda kwespunk. akabva aenda kumusika kunotora zvigadzirwa zvechille con carne yake uye netsaona akatenga nyama yemombe yechingochani. iyo yakanga yakajowa nechlamyedia. Diego akabva ati kuna mario, im sorry shamwari asi zvinoita kunge ngochani yako, saka isu tichabvisa hushamwari kubva kwauri nekukupa mamwe emadzisekuru angu tamales ayo akabikwa nerudo uye rudo.
Pindura kufago kubva kuDora
Kamila avila akadaro
Ini ndinoda basa iri mune tsvarakadenga ndakaiverenga katatu
Pindura Kamila Avila
NICOLLE GONZALES RAMOS akadaro
Mushure mezvose, jaguar anopedzisira adzidza kubva pane zvaakakanganisa nekugadzirisa hupenyu hwake, achiziva zvese zvaakaita uye nekuroora.
Pindura kuna NICOLLE GONZALES RAMOS
Chinese Nyowani Nyowani. Mabhuku e8 kuti aswedere padyo nenyika inonakidza yekumabvazuva
Tricks yekusarudza mazita akanaka kune ako ezvinyorwa mavara